Nhau - Zishan Boka: Hunhu kudzora pamatanho ese kugadzira mvura yekunwa ine hutano
Zishan Boka: Hunhu kudzora pamatanho ese kugadzira mvura yekunwa ine hutano
Wu Xiuli, Zhangzhou TV Station: Ini ndinotenda iwe unenge usiri kujairana nefekitori yatiri kuenda nhasi. Kubva pamunhonga uri patafura kusvika kune michero nemiriwo zvinwiwa isu tinowanzo kunwa, uye kunyangwe iyo yekunwa mvura yatinofanira kunwa zuva rega rega, kumashure kwangu kugadzirwa kwakakura kudaro Inogona kuwanikwa mufekitori. Hongu, ndiyo inotungamira kambani muindasitiri yezvikafu muZhangzhou, Zishan Boka, saka nhasi ndichatevera tsoka dzemutori wenhau kuti ndione kuti zvikafu izvi zvinogadzirwa sei.
Fujian Zishan Boka kiyi yenyika inotungamira bhizinesi. Yakavambwa munaKurume 1984. Mushure memakore makumi matatu ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, ikozvino ine makambani gumi uye makambani akabata ane zviwanikwa zvese zveanosvika bhiriyoni yuan. Yakave yakaongororwa neZhangzhou Municipal Government kwemakore mazhinji. Sa "mubhadhari mukuru". Zvigadzirwa zvinosanganisira chikafu chemumagaba, mapundu, mvura yemaminerari, michero uye zvinwiwa zvemuriwo, nezvimwewo Pakati pavo, iyo Zishan mineral mvura inenge isingazivikanwe. Zvinoenderana nematanho emunyika, mvura yemaminerari inoda kusefetwa nemushonga.
Yang Jubin, maneja weZhangzhou Zishan Mineral Water Co, Ltd.: Iyo marasha firita yakagadzirirwa kushambadzira kumwe kusviba mugomo remvura yemvura. Yechishanu-micron firita, imwe-micron firita uye 0.22 micron firita. Aya mafirita anogona kuona kuti tsvina iri mumvura inosvinwa kuti isangane nechero zvinodiwa, uye pakupedzisira ichipfuura neiyi ozone yekusanganisa shongwe yeSterilize chaiyo, wozoenderera nekuzadza.
Sekusefa tsvina mumvura mbishi, chigadzirwa chese cheZishan chinofanirwa kuongororwa nhurikidzwa.
Yang Jubin, maneja weZhangzhou Zishan Mineral Mvura Co, Ltd.: Inotanga kubva kufuridza, uye bhodhoro rega rega rakanyatso kuongororwa, kuongororwa uye kuzadzwa. Iyo yekuzadza maitiro inoitwa mune isina kubereka mamiriro. Isu tinoona kuti bhodhoro rega rega rinofanira kuongororwa. Chigadzirwa chisati chatumirwa, isu zvakare tine mhando yekudzora kuitisa ongororo pane zvese zvigadzirwa.
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, pane zvekare zvinodikanwa zvekunwa mvura. Mukupindura kushanduko kwemusika uyu, mhando yepamusoro-soro yeZishanshui Zhuleshanquan yakavapo. Kure kure nemhirizhonga yeguta, fekitori yeChengxi muZishan ine masango akaomeswa emishenjere. Tsime remvura yeZhule Mountain Chitubu rinouya kubva mukuchengetedza aya masango emishenjere.
Yang Jubin, maneja weZhangzhou Zishan Mineral Water Co, Ltd.: Iyo bamboo yekufukidza mwero wegomo rese pano wapfuura 90%. Kune chirevo kudivi medu chinoti mvura yakasvipwa nemushenjere inonzi "bamboo spit water." Bamboo mvura inonyanya kutonhorera, uye ayo alkalinity anogona kutapudza isina kusimba acidity yemuviri wedu. Mushure mekunwa mvura yedu, iyo pH inogona kugadziridzwa kuti ive nehutano hwakanaka.
Mumusika unokwikwidza wemvura nezvinwiwa zvemumba, Zishan yakagara ichikwanisa kutora nzvimbo, izvo zvinonyanya kukonzerwa nemaonero ayo chaiwo emusika. Iye munhu anotarisira bhizinesi anotenda kuti mune ramangwana remaminerari emusika wemvura, zvinwiwa zvemvura zvine hutano zvinozokwikwidza. Nekuti vatengi havangodi chete bhodhoro remvura, asiwo mararamiro ane hutano.
Mutori wenhau akati: Mvura chigadzirwa chakajairika. Nekuchinja kunoramba kuripo muhupenyu hwevanhu, indasitiri yezvinwiwa yakasangana nekusimukira kusati kwamboitika. Vatengi vari kudzora zvishoma nezvishoma uye nekusarudza zvinwiwa zvine hutano pakati pezvinhu zvinoyevedza zvezvigadzirwa. Izvi zvinoreva zvakare kuti kana vatengi vatenga zvicherwa mvura mazuvano, chavanotenga hausi rudzi rwekunakidzwa chete, asiwo pfungwa yehupenyu ine hutano. . Ini ndinofunga ichi zvakare chikonzero chakakosha nei Zishan chicherwa mvura yakachengetedza kutengesa kwakatsiga mumusika wemvura yekunwa kwemakore mazhinji uye chave chigadzirwa chakasarudzika cheXiamen Airlines.